mai 2015 – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada mai 27, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur ZAVA-KENDRENA IRAY AO ANATIN’NY MARO KARAZANA
Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” Pastora Randrianaivonirina Dieu Donné izay Mpitondra Fileovana Andohamatsiatra Ambony, Synodam-Paritany Afovoany (SPAF) teo aloha dia npiara-miasa mavitrika tamin’ny FF taorian’ny Fampiofanana indroa miantoana tany amin’io Fileovana io. Mahafaly tokoa ny vokatra azo tany an-toerana na teo amin’ny lafiny Tafika Masina na ny Fampianarana Sofratra Masina Ifandraisana satria dia maro ireo […]
Publié parfilazantsaramada mai 27, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miombon’antoka: FLM-Fileovana Ambalavao Tsienimparihy/Feon’ny Filazantsara
RANO MADIO, FAHALOTOANA, SAMPY, FANAHY MASINA.
« Dia hofafazako rano madio hianareo, ka hadio; ny mba ho afaka amin’ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao hianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka omeko fo nofo hianareo. » Ezek 36:25-26 Andriamanitra manadio. «Ny mba ho afaka amin’ny fahalotoanareo […]
Publié parfilazantsaramada mai 21, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur RANO MADIO, FAHALOTOANA, SAMPY, FANAHY MASINA.
Fifaninanana Soratra Masina Araka ny programan’asan’ny Club Feon’ny Filazantsara (FF) eny amin’ny Lycée Nanisana ho an’ny taom-pianarana 2014-2015 dia nanatanteraka fifaninanana Soratra Masina teny an-toerana ny FF ny 29 Aprily 2015 lasa teo. Niainga tamin’ilay horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohanteny hoe: “Ilay Nosy miafina” moa no nametrahana ny fanontaniana. 29 ireo mpianatra nandray anjara tamin’izany ary […]
Publié parfilazantsaramada mai 20, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fandaharana ho an’ny tanora
NY HERIN’NY VAVAKA.
« Ary hiantso Ahy hianareo, ka handeha sy hivavaka amiko, dia hihaino anareo Aho. Ary hitady Ahy hianareo, dia ho hitanareo Aho, raha katsahinareo amin’ny fonareo rehetra. » Jeremia 29:12-13 Jesosy, na dia Andriamanitra aza dia tena nahery nivavaka, izany hoe tena nahery niresaka tamin’ny Rainy. Raha adika amin’ny teny hafa koa dia Andriamanitra Zanaka mazoto miresaka […]
Publié parfilazantsaramada mai 15, 2015 mai 14, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY HERIN’NY VAVAKA.
TANY KARANKAINA…TANY MISY ONIN’NY RANO VELONA:
« Izay mino Ahy dia hisy onin’ny rano velona hiboiboika avy ao an-kibony, araka ny voalazan’ny Soratra Masina. » Jaona 7:38 Tena ilain’ny vatan’ny olombelona ny rano, ary mitarika ho amin’ny fahafatesana mihitsy ny tsy fahampian-drano amin’ny vatana. Ny Soratra Masina eto dia miresaka onin’ny rano velona, fa onin’ny rano velona miboiboika avy ao an-kibon’ny olona. Ny […]
Publié parfilazantsaramada mai 8, 2015 mai 7, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TANY KARANKAINA…TANY MISY ONIN’NY RANO VELONA:
Alahadin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Gideona Tsy mitsahatra ny mikendry izay hampandrosoana sy hampivelarana hatrany ny asa fitoriana amin’ireo mpiara-miasa aminy ny FJKM Kristy Fiainana, Bemasoandro Itaosy izay iandraiketan’Atoa Botofanjely Sammuël, Mpitandrina. Misaotra an’Andriamanitra lehibe fa taorian’ny fivorian’ny Birao sy ny Filan-kevitry ny Fiangonana dia tapaka fa manomboka izao, ny Alahady voalohan’ny volana May […]
Publié parfilazantsaramada mai 6, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FJKM Kristy Fiainana, Bemasoandro Itaosy